फागुन महिनाको पहिलो हप्ता कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस राशिफल ,.. – News Nepali Dainik
फागुन महिनाको पहिलो हप्ता कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नुहोस राशिफल ,..
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ०१, २०७७ समय: १३:२७:४२
आम्दानी सामान्य र खर्च बढी हुनाले मनमा पीर परिरहला । व्यावसायिक काममा सोचेकोजति प्रगति देखिन्न । सानो–सानो कुरामा समेत घरपरिवारमा कचिङ्गल परिरहनेछ । जागिरकै क्षेत्रमा समेत तपाईंलाई मद्दत गर्नेभन्दा दोष देखाउने धेरै हुनेछन्।
साता राम्रैखालको छ । काम गर्ने उत्साह बढ्ला भने गरेका काम बन्नेछन् । खर्च त घट्ने छैन तर आम्दानीको स्रोत बलियो हुनाले त्यति डराउनुपर्ने स्थिति छैन । वादविवाद बढी पर्ला तर पनि विजय तपाईंकै निश्चित छ । मित्रहरूले राम्रै सहयोग दिनेछन् ।
यो सातालाई राम्रो रूपमा लिन सकिन्छ । मनमा अलि–अलि शङ्का र भय त होला तर त्यसले खास बिगार गर्ने देखिन्न । काम गर्ने उत्साह प्रशस्त बढ्ला । गरेका काम बन्ने पनि छन् । सुरुका दिनमा तपाईंबाट असल एवम् कल्याणकारी काम हुन सक्छ।
शनिबारको दिन त्यति राम्रो देखिन्न । त्यसैले थोरैमात्र बोल्ने र बढी रकमको लेनदेन नगर्नुहोस् । आइतबारदेखिका दिन सामान्य रूपमा राम्रै देखिन्छन् । कूटनीतिक प्रतिभा नभए पनि बौद्धिक स्तर त्यति घटेको छैन । स्वास्थ्यस्थिति मध्यम रूपमा रहला । देवीको दर्शन गर्नुहोस्
मध्यमखालको साता छ । दौडधुप बढी गर्नुपर्ला अनि मात्रै केही काम बन्नेछन् । सोचेकोभन्दा थोरैमात्र लाभको स्थिति देखिन्छ । सानोतिनो यात्रासमेत पनि होलाजस्तो छ । प्रेम वा विवाहको कुरा भने हाल भाँडिन सक्छ । इन्द्राणीको दर्शन गर्नुमा कल्याण हुनेछ।
यो सातालाई त्यति राम्रो भन्न सकिन्न । सानो–सानो कुरामा पनि वादविवाद परिरहला । सङ्घर्ष नगरीकन कुनै पनि काम बन्ने छैन । शनिबारको दिन अझैं राम्रो देखिन्न । आइतबारदेखि बिहीबारसम्म भने केही सफलता नै प्राप्त होला ।
शत्रु बाधा र स्वास्थ्य बाधा दुवैको सामना गर्नुपर्ने बेला छ । गणेशको सेवा नगरीकन कुनै पनि काममा खास सफलता पाउनुहुने छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा समेत धेरै अवरोध आउनेछन् । व्यावसायिक कामबाट सामान्यखालको लाभमात्र लिन सक्नुहुन्छ।
सुरुमा शरीरमा बिसन्चो हुन सक्छ । पेटसम्बन्धी सिकायत भइरहला । आइतबारदेखि बिहीबारसम्मका दिन राम्रैखालका छन् । अलिकति परिश्रम थपेमा निकै काम बन्ने पनि छन् । तर, समस्यासित कुस्ती खेल्नुपर्ने स्थिति भने छ । सूर्यको दर्शनले धेरै फाइदा हुने देखिन्छ।
शनिबारको दिनमा सामान्य रूपले केही काम बन्ला तर आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म स्वास्थ्यका कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुने छैन । बुधबार र बिहीबार भने राम्राखालका छन् । हातले समातेको व्यवसायले गतिलै लाभ देला।
खर्च त घट्न सक्ने छैन तर आम्दानी राम्रो हुनाले खास समस्या पर्ने देखिन्न । शिक्षाकै काममा बढी खर्च हुन जाला । मनमा अलि–अलि डर लागिरहला । प्रेमबारे सकारात्मक कुरा हुनेछन् । विवाहको कुरा पनि प्रगतितिर नै जानेछ । व्यापारमा हाल हानि देखिन्न ।
यो सातालाई राम्रो रूपमा लिन सकिन्छ । अस्थिरता र शङ्का भए पनि बिग्रने समय छैन । सुरुकै दिनमा मित्रहरूसँग भेटघाट हुने र भोजभतेर पर्नेसमेत देखिन्छ । नजिकका भन्दा पनि टाढाका मित्रबाट गतिलो सहयोग मिल्ला । व्यापारको काममा हानि छैन।
खर्च बढे पनि रमाइलो गर्न छोडिने छैन । मनोरञ्जनका कार्यक्रम प्रशस्त हुनेछन् । मित्रहरूको सहयोगले केही नयाँ कामसमेत हातमा पर्न सक्छ । गणेशको आराधना नगरीकन बढ्दो खर्चलाई पुर्याउन गाह्रो पर्ला । यो सातामा केही नयाँ साथीसमेत थपिन सक्छन्।
Last Updated on: February 13th, 2021 at 1:27 pm